प्रदेश २ मा डिआइजिको सकृयता, हतियारसहित युबकहरु धमाधम पक्राउ ! - जागरण अनलाइन
प्रदेश २ मा डिआइजिको सकृयता, हतियारसहित युबकहरु धमाधम पक्राउ !
२०७७ जेष्ठ २२, बिहीबार ०८:३५
जनकपुरधाम । दुई हप्तामा प्रदेश २ को विभिन्न ठाँउबाट ४ वटा पेस्तोलसहित चार जना युवक पक्राउ परेका छन् । धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बेल्ही चैक भन्ने तेतेरीयाबाट प्रहरीले हथियार र गोलीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार मोतीहारी लोहारपटी नगरपालिका वडा नम्बर ८ बस्ने वर्ष २० का डिके भनिने एजिजुल राईन रहेका छन् ।